Comment Gagner de l'Argent sur Instagram Sans Followers 2021 : 9 Izindlela zokwenza
Uyenza Kanjani Imali ku-Instagram Ngaphandle Kwabalandeli 2021 : 9 Izindlela zokwenza
I-Instagram yenze inqubo yokwenza imali online ibe lula kunoma ngubani. Ngakho-ke, ukwenza imali ku-Instagram ngabalandeli abambalwa noma abangenabo yinto engenzeka ngempela. Awudingi abalandeli be-Instagram abangu-10,000 ukuze wenze imali. Ngisho nabalandeli abangu-200-1000 bahle kakhulu, kodwa indlela esheshayo enabalandeli abangu-10,000 ingcono.
Kungenzeka uyazibuza : “Ingabe i-Instagram iyangikhokhela ukuze ngithole abalandeli?” Noma uma uzokhokhelwa ngokuthanda izithombe ze-Instagram. Sizoqhubeka isinyathelo ngesinyathelo.
Sizokukhombisa ukuthi ungayenza kanjani imali ku-Instagram ngaphandle kwabalandeli abambalwa kulesi sihloko., kanye nendlela esheshayo ngemva kokufinyelela umkhawulo wabalandeli abangu-10,000.
Ngaphandle kwalokho, uzofunda izindlela ezisebenzayo zokwenza imali ku-Instagram futhi khulisa ngokushesha inani lakho labalandeli be-Instagram ngokwemvelo.
Bangaki Abalandeli Be-Instagram Abadingekayo Ukwenza Imali?
Ngamafuphi, awudingi abalandeli be-Instagram abayi-1,000 noma abayi-10,000 ukwenza imali.
Kubalulekile futhi ukugwema ukugxila emizamweni yakho nesikhathi ekutholeni u-$20,000 wakho wokuqala wokwenza imali nge-Instagram yakho.. Inani ongafinyelela kulo kanye nokuzethemba okwakhe ngokuhamba kwesikhathi yikho okwenza umehluko.
Noma ngabe unabalandeli abayi-10,000 kuphela, cishe uzoba nokufinyelela okukhulu. Uma ubhekisisa amakhasi anabalandeli ababalelwa ku-100,000, ungase umangale ukuthola ukuthi ukufinyelela kwekhasi labo kungu-0 kuphela,cishe u-50%, okusho ukuthi kubantu abayi-100,000, abangu-500 kuphela abangase babone umlayezo wakho.
Uyenza Kanjani Imali Ku-Instagram Ngaphandle Kokuba Nabalandeli Abaningi?
I-Instagram ingenye yezindlela ezilula zokwenza imali ku-inthanethi ngaphandle kokusebenzisa i-dime. Lolu hlelo lokusebenza lwamahhala likuvumela ukuthi uguqule abalandeli bakho babe yimali.
Nazi izindlela eziyi-9 zokwenza imali ku-Instagram uma unabalandeli abambalwa noma ungenabo.
Facebook. Sabalalisa Izwi Kuzixhumanisi Zokusebenzisana
Ukwenza imali ngokuthengisa okubambisene, kufanele uqale ujoyine izinhlelo zokubambisana ezikhokha kakhulu ukuze ukwazi ukubonisa izixhumanisi ezihambisanayo ku-Instagram yakho bese uthola iphesenti ekuthengeni.
Facebook. Market Physical and Digital Products
Le minyaka edlule, I-Instagram isibe ngumkhiqizi omkhulu wemali engenayo yamabhizinisi we-ecommerce. Njengoba amakhasimende esebenzisa i-Instagram ukuthola nokuthenga imikhiqizo, bethule izici ezengeziwe zama-akhawunti okuhweba, njengokuphuma kwangaphakathi nohlelo, inkinobho yokuthenga, amathegi omkhiqizo nezitika ezingasetshenziswa esitolo ukuze kube lula inqubo yokuthenga.
Facebook. Sabalalisa Izihloko Ezixhasiwe
I-Selon Social Toaster, ukumaketha kwethonya kuyadlondlobala : U-92% wabantu uthemba izincomo zezwi lomlomo, U-76% wabantu uthi kungenzeka kakhulu ukuthi bathembe okuqukethwe okwabiwe abantu abavamile kunemikhiqizo, futhi amakhasimende angu-82% afuna izincomo kubangani bawo ngaphambi kokwenza isinqumo sokuthenga.
isebenzisa indlela yokuzenzakalela yesitayela esithi Landela/Yeka ukulandela enezici ezimbalwa ezengeziwe. Iba Inxusa Lomkhiqizo
Uma ungumgqugquzeli ophumelelayo, ungase ukwazi ukuba yinxusa lomkhiqizo. Lokhu kuvamile uma ibhizinisi lifuna ukwakha ubudlelwano obuqinile nawe futhi likhiqize inani elithile lezinto esikhathini esithile., mhlawumbe kuze kube phakade.
isebenzisa indlela yokuzenzakalela yesitayela esithi Landela/Yeka ukulandela enezici ezimbalwa ezengeziwe. Thuthukisa Okuqukethwe Okubonakalayo Okuzothengiswa
Akuyona imfihlo ukuthi i-Instagram iyinkundla yokubuka : Izithombe namavidiyo ayizigidi eziyi-100 alayishwa nsuku zonke. Noma kunjalo, ukulayisha izithombe zochwepheshe ezipholishwe ngokweqile zemikhiqizo yazo akwanele ukuthi izinkampani zigqame.
6. Nikeza Izinsiza Zokumaketha Kwezokuxhumana
Akuyona imfihlo ukuthi i-Instagram inamandla amakhulu okuthengisa, yisona sizathu esenza ukwanda kwesibalo sezinkampani ziyisebenzisela ukukhangisa ngemikhiqizo yazo, xhuma nezithameli ezihlosiwe futhi andise ukuthengisa kwazo. IBusiness Instagram ithi inamabhizinisi angaphezu kwezigidi ezingama-25 nabathengisi abayizigidi ezi-2.
7. Dala Amazwibela Avaliwe Ezikhangiso
Sezadlula izinsuku lapho izinkampani ezinkulu kuphela ezazingathenga ukumaketha nge-Instagram.. Namuhla, amabhizinisi abo bonke osayizi bafuna ukukhangisa imikhiqizo namasevisi abo kule nkundla, kanye nama-92% amabhizinisi amancane ahlela ukukhulisa utshalomali lwawo ekukhangiseni kwezokuxhumana.
8. Dala Izihlungi Namaski Wezindaba ze-Instagram
Usuku ngalunye, cishe abantu abayizigidi ezingama-500 babuka noma badale Izindaba ze-Instagram. Abantu bamangele ngempela njengoba lolu hlobo lokuqukethwe lutholakala kuphela isikhathi esilinganiselwe, futhi lokhu kunikeza izinkampani amathuba engeziwe okubandakanya izethameli eziqondiswe kubo.
9. Khombisa Izinsizakalo Zakho Ezizimele
Uhlinzeka ngezinsizakalo ezizimele ezifana nokubhala, izithombe, ukuhlanzwa ekhaya noma ukunakekelwa kwezilwane zasekhaya ? Ukuheha amakhasimende, futhi ungakhuthaza amakhono akho nezinsizakalo ku-Instagram. Umgomo lapha ukuheha amakhasimende angaba khona ngokumane ubonise umsebenzi wakho ezithombeni ozithumela njalo ezinkundleni zokuxhumana.. Uma ungumthwebuli wezithombe, thumela ezinye zezithombe zakho ezinhle kakhulu nezinhle kakhulu, futhi wenze iphrofayili yakho ibe yindawo yokwamukela.
23 Izindlela zika-2021Amasu Angcono Kakhulu Okukhula kwe-Instagram namathiphu ka-2021